कुवेतबाट आएका ९ जनालाई नेपाली सेनाले क्वारेन्टाईन पठायो -
Banner News 06/12/2020
कुवेतबाट आएका ९ जनालाई नेपाली सेनाले क्वारेन्टाईन पठायो
परासी, ३० जेठ । कालीध्वज गण परासीले कुबेतबाट आएका ९ जनालाई सम्बन्धित पालिकाको क्वारेन्टाईनमा पठाएको छ । पश्चिम नवलपरासीको परासी स्थित रहेको नेपाली सेनाको कालीध्वन गणले कुवेतबाट आएका ९ जना नेपाली कामदारलाई सामान्वय स्वास्थ्य परिक्षण गरि उनीहरुलाई सम्बन्धित गाउँ÷नगर पालिकालिकालाइ बुझाएको हो ।
सेनाले तेस्रो मुलकबाट आएकाहरुलाई सम्बन्धित पालिकाहरुको जिम्मा लगाउन नेपाली सेनाको जिम्मेवारीमा बर्दघाट स्थित टिसिएन चोकमा होल्डिङ्ग सेन्टर स्थापना गरिएको छ । शुक्रबार बिहान सेन्टरमा आएका उनीहरुलाई स्वास्थ्य परीक्षणपछि सम्बन्धित पालिकाको जिम्मा लगाइएको गणका प्रमुख सेनानी समिर कुमार गुरुङले जानकारी दिए ।
त्यसरी पालिकाहरुको जिम्मा लगाइएकामा बर्दघाट नगरपालिका–४ का ३ जना र वडा नं. १५ का १ जना छन् । त्यसैगरी रामग्राम नगरपालिका–१८ का १ जना, प्रतापपुर गाउँपालिका–१का १ जना, सुनवल नगरपालिका–२ का २ जना र वडा नं. ६ का १ जना रहेका छन् । उनीहरु सबै रोजगारीका लागि कुवेत पुगेका थिए ।
घर फर्कने सबै महिला हुन् । उनीहरु सबैलाई सम्बन्धित पालिकाका क्वारेन्टाइनमा राखिएको छ । पश्चिम जिल्लामा अहिलेसम्म ४५ जना संक्रमित फेला परेका छन् । क्वारेन्टाइनमा बस्नेको संख्या ८ सय ७१ छ । उनीहरु सबै भारतबाट आएका हुन् । भारतबाट आउनेको संख्या घट्दै गएपनि अब तेस्रो मुलकबाट आउन थालेपछि क्वारेन्टाइनमा बस्नेको संख्या बढ्ने देखिएको छ ।
यसैबीच बिहीबार कुवेतबाट आएका मध्ये प्रदेश ५ र ६ का ७२ जना छन् । भाडाको बसमा गन्तव्यमा हिडेका उनीहरुलाई नेपाली सेनाले स्कटिङ्ग गरेर सम्बन्धित जिल्लाको होल्डिङ्ग सेन्टरमा बुझाउने गरेको छ ।
सरावलमा कृषक समूहलाई कृषि उपकरण वितरण
सरावल गाउँपालिकाले गर्याे कृषकलाई मिल्किङ्ग मेसिन तथा काउमेट वितरण
Banner News 08/26/2020
आज थप ८८५ जनामा कोरोनाभाइरस संक्रमण पुष्टि : नवलपरासीमा मात्र ८ जना
नवलपरासीमा आज ८ जना सहित देशभर ८८५ जनामा कोरोनाभाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ । नवलपरासीकाे प्रतापपुर गाउँपालिकामा ७ र सरवाल गाउँपालिकामा १ जना गरि कुल ८ जनामा पुषटी भएकाे हाे । याे सहित जिल्लामा मात्र १९५ जनामा संक्रमीत भएका छन् भने केहि संचाे पनि भैसकेकाे स्वास्थय कार्यालयले जनाएकाे छ । देशभर संक्रमितको कुल संख्या ३४ […]
Banner News 01/28/2020
अनलाइन सपिङको नाममा ठगी धन्दा, ६८ लाखसहित ८ जना पक्राउ
विराटनगर, १४ माघ। काठमाडौं बसोबास गर्दै आएकी छत्रकुमारी धमलाको नाममा खुलेको खाताले ठगी गरेको उजुरी महानगरीय अपराध महाशाखासम्म पुग्यो । उजुरी परेपछि अनुसन्धान गर्दा धमलाको नाममा खुलेको खाता बन्द भएको भेटियो । ठगी उजुरीको छानविनका क्रममा प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएपछि मात्र धमलाले आफ्नो नाममा खाता खुलेको जानकारी पाइन् । अनुसन्धानका क्रममा विराटनगरबाट उनको नाममा बैंक खाता […]